akaiky indrindra casino resort akaiky ahy
mivezivezy avy seatac ny tulalip casino
mivezivezy avy tulalip casino ny seatac
Ny 2015/16 vanim-potoana dia ny vanim-potoana voalohany fa ny WSOPC efa namelatra ny elany sy ny sisa ny fampiononana ANAY tany akaiky indrindra casino ala nenina ny ahy. Ny roa lehibe entrees dia ny $300,000 antoka $1,100 buy-Tsy-Mametra hold'em (NLHE) ny Hetsika Lehibe, izay natao ny 6 Martsa – 9, sy ny $100,000 antoka $330 buy-tany Adjarabet tompon-daka Martsa 4 – 6 akaiky indrindra casino resort akaiky ahy.
Ny mpikarakara dia ho miantoka $700,000 ao loka vola namelatra nandritra ny fito andro mivezivezy avy seatac ny tulalip casino. Loni Harwood no nanjaka tompon-dakan'ny zava-nitranga mivezivezy amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray any amerika mystika lake casino.
Izao tontolo izao Andian-Poker dia sahy ho Eoropa Atsinanana ny fotoana voalohany amin'ny Fiadiana ny Andian-Poker Faritra hetsika natao tany Tbilisi, Zeorzia. Na izany aza, dia efa nanamafy fa hisy hividy-ins ho an'ny rehetra bankrolls, miainga avy amin'ny $25 ny $2,200. Teo aloha WSOP Hetsika Lehibe tompon-daka, Petera Eastgate, dia ihany koa ny hifaninana mivezivezy avy tulalip casino ny seatac. Izao Tontolo izao Andian-Poker (WSOP) mbola manofahofa ny sainam-pirenena ao amin'ny firenena noho ny hatramin'izay amin'ny vaovao iray mananontanona tany Tbilisi, Zeorzia izay no jake ny 58 casino any.